စက်တင်ဘာလ 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Başkan Hayrettin Güngör, Bertiz Mahalleleri ile Yedikuyular’a ulaşım sağlayan arterde ve Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bertiz Mahalleleri ve Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlayan arterde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde [ပို ... ]
ခရိုင် Inc ကိုကြောင့် Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လမ်းပွင့်လင်းနှင့်အတူမြို့အထက်အားဖြင့်၎င်း, သစ်ကိုအကောက်အခွန် UKOME ဆုံးဖြတ်ချက်ဆီကိုပြောင်း Parklake mAlArIndA ဖြတ်ပြီးပြေးယာဉ်ရပ်နားအများကြီးပိတ်လိုက်တယ်။ UKOME (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ) အစည်းအဝေး Kocaeli ခရိုင်မှာယူဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်သာတည်ခဲ့သည် [ပို ... ]
affiliates ulaşımpark Inc. မှ Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဆေးရုံသူမ၏ခစျြတဲ့သူကိုယာဉ်အတွက်ခရီးသည်များ၏လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဘတ်စ်ကားမောင်းသူ Emrah Acar (30) ။ ထို့အပြင် 112 နှင့်၎င်းတို့၏အထက်အရာရှိများကသူချက်ချင်းမောင်းသူ Acer ကမှဆက်သွယ်ပြောဆို, သတိလစ်ခရီးသည်ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအကူအညီလေ့ကျင့်ရေးကြောင်းလေ့လာသင်ယူ [ပို ... ]
Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından Karamürsel D-130 karayolu üzerinde Karamürsel otogar ve kent merkezi bağlantısını sağlamak amacıyla köprülü kavşak ve battı çıktı çalışmasını yapan firmanın şartları yerine getirememesi nedeniyle iş hakkını fesih etti. Karamürsel köprülü kavşak [ပို ... ]
Gundogdu ရင်ပြင်ကနေ Alsancak ဘူတာအဝင်ဝရန် "အတူတူလမ်းလျှောက်ဖို့" ဟုအဆိုပါİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ကျင်းပနေတစ်ချိန်တည်းဥရောပ Mobility ကိုအပတ် (16-22 စက်တင်ဘာလ) မှာအတော်များများနေထိုင်သူများလမ်းလျှောက်လှုပ်ရှားမှု၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ မသန်စွမ်းတစ်ဦးချင်းစီ Alsancak များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူလက်မောင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်လက်မောင်းကိုဖန်ဆင်း [ပို ... ]
Çiğliစွန့်ပစ်ရေကုသမှုစက်ရုံအလုပ်သန့်ရှင်းရေးMürselpaşa Boulevard ကနေဆောင်သော၏ပြည်တွင်းစွန့်ပစ်ရေစုဆောင်းလိုင်းထွက်ပေါက်အပိုင်း 23 စက်တင်ဘာလ၏နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုYeşildereလမ်း Basmane ဦးတည်ချက်မှာပြုမိပါလိမ့်မည်ထံမှအသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။ Izmir ရေနှင့် Sewerage အထွေထွေ၏ Izmir မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး [ပို ... ]
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၏ညွှန်ကြားမှု၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူတူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD xnumx.bölg၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၏အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကော်မတီအစည်းအဝေးနှင့်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနအီးညုမေတ္တာနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနည်းပညာဆိုင်ရာအဖွဲ့လူမှု Facility ကျင်းပခဲ့သည်။ အကြီးတန်းနှင့်အလယ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှုန်ထမ်းများ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]
ယနေ့တွင်သမိုင်းအောက်တိုဘာလဝန်ကြီးအဖွဲ့ Mabeyn-i Humayun တင်ပြခဲ့ပါသည်အားဖြင့် 22 1882 Mersin-Adana-i လိုက်လျောလေလံညီလာခံအတည်ပြုချက်၌တည်၏။ အဆိုပါ 22 1927 အောက်တိုဘာလဆောက်လုပ်ရေးအတွက် Filyos Filyos-မြစ်အညီစတင်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ 22 1939 Sivas မီးရထားအလုပ်ရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Related သတင်းနှင့်မီးရထား [ပို ... ]
မြို့တော်တူရကီ, တနင်္ဂနွေစက်တင်ဘာလ 22 အပေါ်ရောင်စုံဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မည်အဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအားကစားပြည့်နေပါသည်ရန်။ ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်များ၏နယ်ပယ်အတွင်းအားလုံးတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်နှင့်ဥရောပနေ့ရက်ကာလ၌တနင်္ဂနွေစက်တင်ဘာလ 22 အပေါ်ကမ္ဘာတဝှမ်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် [ပို ... ]
အဆိုပါပါဝင်မှုသိပ္ပံနှင့် "ပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာ၏မီးရထားဌာန Institute" တွင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်သုတေသနတူရကီ၏ကောင်စီ (TUBITAK) နှင့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) နဲ့တူရကီနိုင်ငံစက်မှုနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mustafa Varank, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan တည်ထောင်ခြင်း [ပို ... ]
Denizli မြူနီစီပယ်၏အကူးအပြောင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းများအများအပြားကဏ္ဍများကကြိုဆိုခဲ့သည်။ Hallaçlar, Zeytinköyနှင့် Caravanserai မှ Gerzeli မြို့တော်ဝန်သူတို့ကမြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကားမှဖန်ဆင်းချိန်ညှိ၏နေထိုင်သူများအဖြစ်အကြီးအစိတ်ကျေနပ်မှုကြားသောပြောပါတယ်။ DENiZLiLiLER ပိုမြန်, [ပို ... ]
Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် ahi အပတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းနာမည်ကျော်စက်ဘီးခရီးစဉ်တည်ခင်းဧည်ထားပြီးဆိုင်ကယ် Sunflower ချိုင့်အားဖြင့်မြို့ထဲသို့ imparted ။ Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာဦးစီးဌာန Sunflower ချိုင့်၌ On-site ကိုစက်ဘီးလည်ပတ်ဆက်လက် [ပို ... ]
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Izmir ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်ခရုဇ်သင်္ဘောနောက်တဖန် Izmir ပုံမှန်လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်အတူပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများလုပ်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ဂျီနိုအာ, အီတလီ၏မွို့၌ Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer နှင့် Izmir ကုန်သည်ကြီးများဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Oguz Özkardeşler [ပို ... ]
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်, အနိမ့်ဗို့ Transformer နဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖိုစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီ, Elektra သည်အီလက်ထရောနစ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌န်ထမ်း, ပို့ကုန်အချိုးအစားနှင့်တူရကီအတွက် R & D ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအရေအတွက်,6ပြည်တွင်းမှ 60 နိုင်ငံများတွင် continents နှင့်ပို့ကုန်အမျိုးသားရေး Transformer နှင့်အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များသိထားသညျ။ [ပို ... ]
၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများထွက်တင်ဆောင်လာသောမြို့ပြရထားလမ်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအော်ပရေတာများအတွက်လိုအပ်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) နှင့် TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ၏သမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပိုပြီး 1 နှစ်ပေါင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုလက်မှတ်တိုးချဲ့ကာလကိုလက်ခံရရှိ,4နှစ်ပေါင်း5နှစ်ပေါင်း [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တိုးမြှင့်ပြီးနောက် Kocaeli အသစ်အခွန်ယနေ့အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး3Izmit အတွက် POUNDS ။ စက်တင်ဘာလ5ကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးအတွင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပုံမှန်အတိုင်း၏ 8 10 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်အတူ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME) [ပို ... ]
2019 - affiliates Inc. မှ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ulaşımparkရာသီ၏အဖွင့်နှင့်အတူ 2020 ပညာရေး Akçarayအားဖြင့်ကောက်ယူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောငျးသားမြား၏ရောက်လာတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလမ်းရထားသွားရောက်ကြောင်းအပတ်က 1 93 448 တထောင်ကျောင်းသားများ, အရှိဆုံးပိုမိုနှစ်သက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]